Special: Shandisa yedu yekubatana chinongedzo kuwana 30% KUSVIRA 3 mwedzi kunyoreswa kweHelpScout Standard Chirongwa. Nepo vatungamiriri vachifungidzira kuti kambani yega yega yave kambani yemidhiya, ndinopokanawo kuti kambani yega yega inodawo basa rakakura revatengi uye mhinduro. Kana paine imwe nyaya inogona kukanganisa ako enhau enhau kushambadzira, haisi kupindura zvinobudirira kune zvikumbiro zvevatengi. Batsira Scout inopa chikuva cheanogona kutsigirwa mutengi rutsigiro pasina kuomarara uye manejimendi
Muvhuro, April 12, 2010 Svondo, October 4, 2015 Michael Reynolds
Chero ani anondiziva pamwe anoziva kuti ndiri fan hombe yeGoogle Apps. Zvakare kuburitswa kuzere, SpinWeb ndeye Google Apps Authorized Reseller, saka kuzvipira kwedu kuchigadzirwa kuri pachena. Pane zvikonzero zvakawanda zvakanaka zvekufadzwa neGoogle Apps, zvisinei… kunyanya sebhizinesi diki. Google Apps ndeyechokwadi kutsiva Microsoft Office. Kana ndichiudza vanhu izvi, ivo dzimwe nguva vanonyunyuta, ndosaka